ကျန်းမာရေး - 7/7 - Kantarawaddy Times
ဖရူဆိုမြို့နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ကုသဦးစီးဌာနမှူး ဒေါက်တာကောင်းမြတ် နှင့် ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်)မှ တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်
ကညားမော် “ဆေးခန်းပြရကောင်းမှန်းမသိဘူးဆိုတော့ ဟုတ်တယ်။ ။သူတို့မသိတဲ့အတွက် မသွားတာ။ ဒီဆေးရုံဆေးခန်းကို အားကိုးရမယ်ဆိုတာ လူထုတွေက နည်းနည်း Familiar မဖြစ်သေးဘူး။”လို့ ဆိုတဲ့ ဖရူဆိုမြို့နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနှင့် ကုသဦးစီးဌာနမှူး ဒေါက်တာကောင်းမြတ် နှင့် ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်)မှ တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်အချို့ထဲက ပြန်လည်ကောက်နုတ် ဖေါ်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ မေး ။ ။ ဖရူဆိုမြို့နယ် ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ အခုတလော လှုပ်ရှားမှုတွေကို ပြောပြပေးပါ။ ဖြေ ။ ။ ဆေးဖျန်းတယ် တစ်ခုတည်းတော့မဟုတ်ဘူး။ ဆရာတို့ ထီးတရဲရပ်ကွက်က လူနာတစ်ယောက်ကဆေးရုံလာတက်တော့ပေါ့နော။ အသက်(၃၂) အမျိုးသမီး လာတက်တော့ လက္ခဏာကသွေးလွန်တုပ်ကွေးလက္ခဏာရှိတယ်။ ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးလိုက်တဲ့ အဖြေကြီးကသွေးလွန်တုပ်ကွေးဖြစ်နေတယ်။ အဲ့ဒီအတွက်ကြောင်းမို့လို့ သွေးလွန်တုပ်ကွေး ကာကွယ်ရေးနှိမ်နင်းလုပ်ငန်းဆိုပြီးတော့မှ ထီးတရဲရပ်ကွယ်မှာသွားပြီးတော့ ဆောင်ရွက်တယ်ပေါ့။ မေး။ ။ သွေးလွန်တုပ်ကွေးလူနာဆေးရုံတက်တယ်လို့ […]
ကျန်းမာရေး ဆောင်းပါး သတင်း
ခွဲစိတ်ကုသမှုအတွက် အကူအညီလိုအပ်နေတဲ့ မအဲလစ်ဝင်း (သို့) မောင်အောင်လင်းနိုင်ရဲ့ ဘဝ
စိုင်းလင်းလင်းဦး အချိုးအစား ကျနသော မျက်နှာထားပိုင်ဆိုင်ထားကာ လည်ဂုတ်အထိ ရှည်လျားသော ဆံပင်ကို သူ၏ ဘယ်ဖက်မျက်နှာအခြမ်းတွင် ပင့်တင်ထားသည်။ သူသည် အမျိုးသားအဖြစ်ကို ခံယူချင်နေချင်သူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ လွိုင်ကော်မြို့ နောင်ယားရပ်ကွက်နေ မောင်အောင်လင်းနိုင်၏ ရည်မှန်းချက်သည် ထိုသို့ဖြစ်သည်။ ငယ်စဉ်ခါက မောင်အောင်လင်းနိုင်ကို အမျိုးသမီးအင်္ဂါနှင့် မိန်းမတစ်ယောက်၏ ပုံဏ္ဍာန်အဖြစ်သာ ဖွေးဖွားလာခဲ့သည်။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကဲ့သို့ပင် သူ့ကို မိသားစုနှင့် လူ့ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝန်းက သတ်မှတ်ထားကြလေသည်။ သူ့၏ ငယ်နာမည်ကာ မအဲလစ်ဝင်း ပင်ဖြစ်သည်။ နက်နဲထူးခြားဆန်းကျယ်သော လူ့ဘဝ၏ တစ်ဆစ်ချိုးအကွေးကို မအဲလစ်ဝင်ကနေ မောင်အောင်လင်းနိုင် ဖြစ်သွားခဲ့ပြီ။ အဖြစ်က ဤသို့တည်း။ ကျောင်းနေအရွယ် အသက် ရ နှစ်အရွယ်ရောက်လာစဉ်က ဖြစ်သည်။ သူ့၏ မအင်္ဂါအတွင်းမှ ယောကျင်္ားလေ၏ […]
လိုခါးလို တိုက်နယ်ဆေးရုံတွင် ဆရာဝန်ပုံမှန်မရှိခြင်းကြောင့် ဒေသခံများအခက်တွေ့
ထျိုးမြာ ဘောလခဲခရိုင်၊ ဖားဆောင်းမြို့နယ်၊ မော်ချီးဒေသရှိ လိုခါးလိုတိုက်နယ်ဆေးရုံတွင် ဆရာဝန်များ ပုံမှန်မရှိခြင်းကြောင့် ဒေသခံများဆေးကုသမှုခံယူခွင့် ကောင်းစွာမရရှိနိုင်ကြ ဟု မော်ချီးဒေသမှ NLD ရပ်ကျေးဥက္ကဌ ဦးဇော်သူရိန်ဝင်းကပြောသည်။ “ဆေးပစ္စည်းအစုံအလင်နဲ့ ဆရာဝန်လေးငါးယောက်တော့ လိုတာပေါ့။ မော်ချီးဒေသက ဖားဆောင်းမြို့နယ်ထဲမှာပါပေမယ့် လူဦးရေးကပိုများတယ်လေ၊ ဖြစ်နိုင်ရင် ဖားဆောင်းဆေးရုံလိုပဲ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြည့်ပြည့်စုံစုံရရင်တော့ ပိုကောင်းတာပေါ့။” ဟု ဦးဇော်သူရိန်ဝင်းကပြောသည်။ လက်ရှိအနေအထားအရ ဆရာဝန် အများစုမှာ ဝေးလံသော နေရာများသို့ သွားရောက်ပြီး တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုမပြုလုပ် လိုသည့် ပြသနာရှိနေကြောင်း စည်ပင်သာယာရေးနှင့် လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာအောင်ကျော်ဌေးက မော်ချီးဒေသခံပြည်သူများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည့် ဇူလိုင်လ ၅ ရက်နေ့က ရှင်းပြပြောဆိုခဲ့သည်။ “ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက်လို့ ကုသရေးနဲ့ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဆိုပြီးတော့ နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။ ကုသရေးဆိုတာက ဆေးရုံကြီး […]
Drinks Food ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) ကျန်းမာရေး
Vivamus vestibulum ut magna vitae facilisis. Maecenas laoreet lobortis tristique. Aenean accumsan malesuada convallis. Suspendisse egestas luctus nisl, sit amet suscipit sapien pretium sed. Nam porta magna id lacinia efficitur. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Pellentesque molestie nulla ut tortor hendrerit ultricies sed […]
ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) ကျန်းမာရေး သတင်း
In lobortis malesuada neque,amaximus leo interdum nec. Mauris sodales tempus sem non accumsan. Sed congue turpis risus, quis aliquet justo ullamcorper ut. Donec id velit ligula. Nunc gravida, quam vel tempus lobortis, mauris dolor sodales urna, nec lacinia turpis lorem et mi. Fusce dictum nunc metus, vel maximus […]
Food ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) ကျန်းမာရေး
Female Sports ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) ကျန်းမာရေး ဖျော်ဖြေရေး
Food General ကန္တာရဝတီတိုင်း(မ်) ကျန်းမာရေး
Bear claw cake cake apple pie candy muffin. Dessert croissant soufflé cheesecake dessert croissant dragée candy canes candy canes. Wafer wafer oat cake pudding marzipan. Apple pie soufflé cake marshmallow. Fruitcake tiramisu dessert chupa chups ice cream gingerbread. Jelly caramels carrot cake biscuit jujubes soufflé muffin. Gummi bears bear claw […]